Ny famoronana vaovao - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-02 > Ny voary vaovao
Nanomana ny tranontsika Andriamanitra: «Tamin’ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary lao sy foana ny tany, ary haizina no tambonin'ny lalina; ary ny Fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano » (1. Mosesy 1,1- iray).
Aminny maha Andriamanitra Mpamorona azy dia namorona an'i Adama sy Eva izy ka nitondra azy ireo tany amin'ny saha Edena tsara tarehy. Nitaona ny olona voalohany i Satana ary resin'ny fakam-panahy izy. Noroahin'Andriamanitra hiala tao paradisa izy ireo, ary nanomboka nanjaka tamin'izy ireo araka ny fombany.
Araka ny efa fantatsika, io fanandramana ny fanaovana izay rehetra nilain'ny zanak'olombelona dia nitarika be dia be ho antsika rehetra, ho an'ny famoronana ary koa ho an'Andriamanitra. Mba hamerenana ny baikon 'Andriamanitra dia nandefa an' i Jesosy Zanany ho ao amin 'izao tontolo izao maizina isika.
« Ary tamin'ny andro izay dia tonga avy tany Nazareta any Galilia Jesosy ka nataon'i Jaona batisa tao Jordana. Ary niaraka tamin'izay, nony niala teo amin'ny rano Izy, dia hitany fa nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailala nankeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Hianao no Zanako malalako, ianao no sitrako” (Mar 1,9- iray).
Avy eo, rehefa nanatona an’i Jaona mba hatao batisa i Jesosy, dia toy ny feon-trompetra manambara an’i Adama faharoa, Jesosy, sy ny fiavian’ny zavaboary vaovao. Miorina amin'ny niandohan'izao tontolo izao araka ny misy azy 1. Lazaina i Mosesy fa nidina tety an-tany i Jesosy mba hosaronana rano. Rehefa nitsangana avy teo amin’ny rano Izy (batisa), dia nidina taminy toy ny voromailala ny Fanahy Masina. Izany dia fampahatsiahivana ny fotoana nivezivezy teo ambonin’ny rano lalina ary tamin’ny faran’ny safo-drano ny voromailala nitondra sampan’oliva maitso niverina tany amin’i Noa ary nanambara ny tontolo vaovao. Nambaran’Andriamanitra fa tsara ny zavaboariny voalohany, fa ny fahotantsika kosa no nanimba azy.
Tamin'ny batisan'i Jesosy dia nisy feo iray avy tany an-danitra nanambara ny tenin'Andriamanitra ary nanambara an'i Jesosy ho zanany. Nolazain'ilay raim-pianakaviana fa nazoto an'i Jesosy izy. Izy no mandà tanteraka an'i satana ary nanao ny sitrapon'ny Ray nefa tsy niraharaha tamin'ny fandaniana izany. Natoky azy mandra-pahafatiny teo amin'ny hazo fijaliana izy ary mandra-pahatongan'ny fahariana faharoa sy ny fanjakan'Andriamanitra, aorian'ny fampanantenana. Fotoana fohy taorian'ny batisany, ny Fanahy Masina dia nitarika an'i Jesosy hiatrika ny devoly any an-tany efitra. Tsy toa an'i Adama sy Eva i Jesosy fa nandresy ny andrian'ity tontolo ity.
Ny zavaboary epika dia misento ary manantena ny fahatongavan'ny famoronana vaovao. Tena miasa tokoa Andriamanitra. Tonga teto amin'izao tontolo izao ny fanjakany tamin'ny alalan'ny Fahatongavan'i Jesosy, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ao amin'i Jesosy ary amin'ny alalany dia efa tafiditra ao amin'ity famoronana vaovao ity ianao ary hitoetra mandrakizay!